Ubuntu 13.10 Ntọhapụ dị iche? | Site na Linux
Echi ga-abụ ụbọchị a tụrụ anya ya site na nde ndị ọrụ gburugburu ụwa, ndị ọrụ nke Ubuntu N'ezie. Ma ọ bụ na mbipute 13.10 ga-eweta ya na ọ dị mkpa nzọụkwụ Canonical: Ubuntu Ekwentị OS.
Kwa uto nke Ubuntu ga-eweta mgbanwe ya na ndozi ya, mana ọ kachasị, enwere m mmasị pụrụ iche n'ịhụ ihe na-eme na atụmatụ ọhụrụ a nke Canonical iru ahịa ekwentị.
Ọnwa ole nke ule akwụwo ụgwọ ma ị nwere ike ugbu a ịwụnye (ma ọ bụ gbalịa ịwụnye) Ubuntu ekwentị na ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche, ka anyị lee tebụl na ngwaọrụ ndị enwuruworị:
Device Ibe ọnọdụ
Njedebe Asus Transformer Nw700t
Asus Transformer Kedo akwa TF300T Nw300t
B&N Nook Mbadamba ụrọ kwuputa
Ogwe Dell 7 Ogologo 7
HTC Ọchịchọ Z (jiri –ihe na phablet-flash ma ọ bụ buut ga-abụ na ọ ga-ada!) ọhụụ (ọdụ ụgbọ mmiri, nke a na-emeghebeghị: ọhụụ)
HTC Evo LTE ọla
HTC One X gbaa mbọ
Huawei ọdọk G300 u8815
Ụdị ọkụ 1st Gen otter
Kindle Fire 2nd Jen Ugboro2
Kindle Fire HD 8.9 " jem
LG ụdịdị dị iche iche 4G Nwachukwu
Motorola Droid RAZR onye nledo
Motorola RAZR (GSM / Mba) Ugochukwu
Motorola Xoom nku
Nexus Otu ahuhu
Oppo Chọta 5 chọta 5
Samsung Galaxy Note 10.1 n8000, gbanye
Samsung Galaxy S (GT-I9000) ụyọkọ kpakpando
Samsung Galaxy SB (GT-I9000B) ụyọkọ kpakpando
Samsung 7.7 Galaxy Tab (GT-P6800) p6800
Samsung 10.1 Galaxy Tab WiFi (GT-P7510) p4wifi
Samsung 2 7.0 Galaxy Tab (p3110 / p3113) p3110
Samsung 2 10.1 Galaxy Tab WiFi P5110
Sony Xperia Neo nke V ala
Sony Xperia Mbadamba Z mmetọ, gbanye
Sony Xperia Z yuga, gbanye
Sony Xperia ZL isi, gbanye
VZ SGSIII Obochi
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa ndị ọzọ nke otu egwuregwu nwere ike ịgba ọsọ Ubuntu Ekwentị OS na ndị nọ na ule ule, gaa njikọ a.
Maka nke kachasị dị ize ndụ, enwere ibe na Ubuntu Wiki ebe ha na-egosi anyị usoro nrụnye nzọụkwụ site na nkwụsị:
Usoro Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Mbido nke echi ọ ga-adị iche na nke Ubuntu jirila anyị mee? Nọgidere na-hụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 13.10 Ntọhapụ dị iche?
Kwa ụbọchị oge iji zụta mbadamba nkume dị ike ma ọ bụ Smartphone na-eru nso.
Ọtụtụ anaghị aghọta ntoputa nke Ubuntu na-eme. Ọ bụ ezie na Canonical emeela ụfọdụ mmejọ n'oge na-adịbeghị anya, yana mmepe nke Ubuntu Touch ọ na-ekwe nkwa ọdịnihu dị ukwuu maka Linux. Obodo dị iche iche ga-aghọta na ọdịnihu nke ngụkọta oge nke onwe bụ mbadamba, ọ gaghị adị ogologo oge tupu nke mbụ ejiri dochie net na akwụkwọ ndetu. Ọ bụrụ na Linux achọghị ịnọ oge, echere m na obodo niile ga-echegbu onwe ha maka ịmepụta distros ha ka ha dakọtara na smartphones na mbadamba.
Ezigbo ọchị maka nri ehihie xD
HAHAHAHA Enwere m mbadamba na Net ya mere o ji ada ka egwuregwu
Ogbe 36 dijo
Nke bụ eziokwu bụ na ihe ị kwuru mere m ịhụ ndị na-eto eto, ọtụtụ na-ahapụ mbadamba echefuru echefu ma mee ihe niile site na ekwentị ha rụọ ọrụ ụlọ.
Maka onye na-abụghị teknụzụ onye ọrụ mbadamba / ekwentị ezughị ezu, a na-ahapụ kọmputa naanị maka ọrụ ọrụ.
Zaghachi na pedrowc. 36
Ọrụ, egwuregwu na multimedia. Nke ahụ bụ ihe kọmputa dị maka. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ chọrọ naanị netwọkụ mmekọrịta na nkata, maka na ama amaka, mana nke ahụ apụtaghị na kọmputa ga-apụ n'anya.
Zaghachi iji zuo ohi
Ọ bụrụ na m kwenye kpamkpam, kọmpụta desktọọpụ agaghị akwụsị, naanị iji ha ga-ebelata na niche ụfọdụ.
Ọbụna mbadamba nkume ndị ha na-enye / na-akwalite maka ịrụ ọrụ 8 awa kwa ụbọchị, ana m ahụ ha dị ka nkwado, mana ọ bụghị dị ka onye nnọchi nke kọmputa desktọọpụ, n'ihi na ihe ha gosipụtara na azụmahịa dị mma nke ukwuu, mana achọghị m ịkwụsị na-ahapụ anya m na ihuenyo 10 ″ (Ana m agbanye iko).
Ihe ha kwuru banyere netbook, na mba m naanị ndị a na-ere bụ nguzozi, na akụkụ ndị ahụ anaghịzi aba ụba dịka afọ ole na ole gara aga, na ee ... ugbu a, akụkụ dị n'akụkụ jupụtara na mbadamba.
ara agbaala gi? mbadamba nkume agaghị agbanwe net
Lee onye na-ekwu okwu onye na-eji ShitOS kama iji Ubuntu na-eduzi ihe atụ ole ị ee sir
M na-eji Ubuntu na m nwere ike ikwu maka ya, onye ọ bụla nke na-eji Shit OS nke na-ekwu maka ihe ahụ Mocosoft OS nwere nje, Trojans, spyware, nke nwekwara ndị ohi na-akwụghị ụgwọ € maka ikike, na Linux ị chọghị nke ahụ, Enwere m Ubuntu na enweghị ụgwọ na enweghị iwu (ọ bụghị dị ka ndị na-eji Shit)
Chuchi Saldana dijo
Ezigbo ozi ọma 😀
Zaghachi ka chuckSaldana
A na-eche na ọ ga-aka n'oge iji nye echiche. Na ibe ọ dabere na ihe nlereanya ahụ m hụrụ na ọ bụghị ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ma ọlị.Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na arụmọrụ ahụ ka nke android mma ma ọ bụ na o yiri ma ọ bụ ka njọ.Ha na-ekwu na Ubuntu agaghị arụ ọrụ na java, nke a bụ ya ?????
Obi abụọ adịghị ya na ndị na-ede akwụkwọ nsọ nwere echiche dị mma, ma ọ bụ echiche ndị dị ize ndụ. Ewezuga ma ọ masịrị ha ugbu a, maka ugbu a, echere m na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ (canonical) na nkesa (Ubuntu) nke raara onwe ya nye ime ihe dị iche na ịdị n'otu (ọbụlagodi na ọ na-emechi nke ha) .Am nwere olile anya na ka oge na-aga, ha mepụtara ọhụụ. Ma ọ na-eme
Echi ịntanetị ga-ejupụta na trolls haha ​​dị ka ọ na-eme mgbe niile mgbe onye ọhụrụ Ubuntu pụtara, ọ bụ ezie na W8 ga-ekpuchi ya na mmelite echi (na Fraịde a na-ere ya)
Chọọ maka L9 na ọ nweghị ihe na-arụ ọrụ haha ​​ọ dịghị onye na-arụ ọrụ 100% ...
O nwere otu ihe na-emetụ m n'ahụ. Echere na Ubuntu Touch bụ onye nweere onwe ya na gam akporo, kama ọ dị ka ọ na-eji sistemụ gam akporo maka ihe, ọ maara ihe maka ihe? Ọ dị ka ịnwe sistemụ abụọ n'otu oge, mana otu nọ na-agba ọsọ na ndabere na nke ọzọ bụ nke ị na-ahụ, belụsọ Ubuntu Touch na-agba ọsọ na gam akporo (na nke a ọ ga-abụ ile ya anya). Ah, ụdị gam akporo bụ 4.2.2, otu maka Cyanogenmod.
Achọrọ m ịwụnye ma wụnye KDE XD
Echi Ubuntu 13.10, ekwentị Ubuntu na Windows 8.1 ga-ahapụ. Ga-ahụ ihe na-eme.
Kedu ngwa dị maka ekwentị Ubuntu? Anaghị m gbasara ịwụnye egwuregwu na ihe mana dịka ọmụmaatụ:
Twitter, ozi ma ọ bụ whatsApp. A ga-enweta ngwa ndị a?
Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na enwere ike itinye ya na mbadamba pd10 nke China, ọ ga-adị mma ịme mgbanwe 🙂
Zaghachi Miguel Perez
Ndewo Elva ekele, amaara m na nke a enweghị ihe jikọrọ ya na post mana site na ohere ọ bụla ị maara ihe kpatara enweghị ike ịwụnye Google Chrome na Ubuntu na nkwekọrịta ya n'oge a?
Anọ m na-agbalị kemgbe abalị gara aga ma ana m enweta njehie na-esonụ:
"The lib32gcc1 dependency bụ afọ ojuju"
Echere m na ọ bụ nsogbu Ubuntu ka m mee Live USB nke Linux mint 15 wee budata .deb na Chrome ọzọ na Wow! Enwetara m otu njehie ahụ, agara m Elementary OS (Ubuntu 12.04.4 LTS) ma otu ihe ahụ na-eme, ọ dịghị ubuntu ọ dị ka Google Chrome ka arụnyere.
Ọ ga - abụ nsogbu na sava Google?
Achọrọ m ịhapụ ajụjụ a, enwere m olileanya na ị nwere azịza iji nyere gị aka ịghọta ihe na-eme.
Ndewo Jamin-Samuel. O meela m na Debian Wheezy, ya mere nsogbu a bụ mgbanwe na Chrome ma ọ bụghị sistemụ arụmọrụ.
Ma ị nwere ike ịwụnye Chrome nke ọma na Debian Whezzy?
Achọghị m ka m jọ njọ ma ị kwesịrị ịjụ ajụjụ na nnọkọ, agbanyeghị ọ dịghị mkpa ịjụ ma ọ bụrụ na ị chọghị na google, n'ihi na ị bụghị UNIQUE, nye ọtụtụ ndị ọ mere ma ha rịọrịrị ka ọ kwesịrị na Ubuntu na nkwado Google, na enwere eriri sara mbara ebe na-ekwu maka nke ahụ ... google bụ enyi gị. Kedu nkasi obi
Eeh, dị mma, mana ... Enwere m ike ịwụnye Kde ma ọ bụ Gnome na ekwentị Ubuntu?
Enwere m olileanya na ndị ọrụ Ubuntu ekwentị XP kwagara Linux 😀
Ọ dị mma, enwere m olile anya na ụmụ okorobịa na ndị mmepe XDA ga-emekwa ọfụma maka ịhazigharị ekwentị Ubuntu na Samsung Galaxy Obere dị ka ha mere na CyanogenMod 10.1 (ruo ugbu a, nsogbu efu).
Ndewo oge, gwa m ihe rom ị na-eji maka ụyọkọ kpakpando, n'ihi na mgbe ọ bụla m wụnye 10.1, mgbe ụbọchị 2 gachara ekwentị na-amalite inye nsogbu, anaghị m etinye egwuregwu ma ọ bụ ihe ọ bụla ...
The ROM m na-eji bụ nke m googled. N'ezie, na weebụsaịtị m ahapụla a obere nkuzi banyere otu esi eme ya (yana njikọ ya na faịlụ ndị dị mkpa).
Ọ dị ka ezigbo mma (https://www.youtube.com/watch?v=94ORP3Fp1f0)… Olileanya a ga-enwe ọdụ ụgbọ mmiri maka m ọnụ.
Enwere m olile anya na enwere ọdụ ụgbọ mmiri maka Samsung Galaxy Mini m.
Ndi nde mmadu chere? ọtụtụ ndị ọrụ na-atụ anya windo ịlaghachi menu mmalite. Ihe ndi ozo bu maka freakis.
Zaghachi Maria Jose Escobar
Na-akpali… O yiri ka m hụrụ a ule image si n'ebe Nexus 7, otú kwesịrị ka a ikpeazụ mbipute mgbe e mesịrị m maa.
Ugbu a, ndị mmadụ na-ekwu maka ọdụ ụgbọ mmiri… Amaghị m ihe opekempe chọrọ ga-abụ, mana ahụghị m ekwentị igwe ARMv6 ọ bụla edepụtara ka m wee ghara inwe echiche ọ bụla gbasara Galaxy Mini, Ace, na ihe ndị ọzọ. Firefox OS nwere ike yikarịrị (Atụrụ m anya na akụkụ a anaghị emepụta ihe enweghị isi ebe enweghị).
Maka ndị ọzọ, Achọrọ m ịhụ ebe nke a na-aga 🙂 Ebe ọ bụ na enweghị ekwentị EDGE, ọ gaghị enwe otu ewu ewu (Echere m).
Amaghị m ihe kpatara ya mana afọ abụọ gara aga mgbe m chọrọ ịgbanwe gaa GNU / Linux; nkesa izizi pụtara n’ihu m bụ Ubuntu ... ọ na-achọgharị ya ma na-agbapụkwa Windows ọzọ ... mgbe ahụ “mgbe ụjọ” na ile obere anya, achọtara m Kubuntu na desktọọpụ KDE site na mgbe ahụ anaghị m Ogologo oge kewapụrụ GNU / Linux ma ọ bụ KDE, m na Mageia ugbu a ọ bụ 2.
Buuuhhh, ọ bụghị maka Galaxy S4 Exynos m, gịnị bụ mwute !!!
M gbara ọsọ iji wụnye ya>: D.
O dakọtara na Kindu Fire 2 ... M etinyela ya na m ka m nwalee ya ma ọ ga-anọgide na-ada na ihuenyo nnabata ...
Zaghachi ka o reimashi
zi xiu tang bee pollen saịtị dijo
Zaghachi ka saịtị ahụ zi xiu tang bee pollen site
Ihe mere gam akporo abụghị distro (na esemokwu)